Achawlaymyar - Page 185 of 209 - News and Media
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံးနေ့ကို ပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ပြောရမယ်..။“အဘိုးကြီးက ကျွေးသလောက်ငတ်တယ်” တဲ့ လား.. ?
ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင် ဒီနေ့လို့ပြောရမယ်။“အဘိုးကြီးက ကျွေးသလောက်ငတ်တယ်” တဲ့မနက်စောစောဆိုရင် ကျုပ်ကဆာပြီ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဘဏ်ကိုသွားနိုင်တော့ ပင်စင်လေးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်၊ပိုက်ဆံလေးကိုင်ပြီး စားချင်တာ ဝယ်စားနိုင်သေးတယ်။ ခုတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာ ၂ နှစ်ကျော် သွားပြီ။ချော်လဲပြီးကတည်းက မထနိုင်တော့တာ ခုထိပါပဲ။ မိုးလင်းရင် ဗိုက်ဆာတယ်။ ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ဖြစ် သောက်ချင်တယ်။ပျော့တာလေးတွေပဲ စားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကျွေးတာ စားရမယ်။ ချေးများနေလို့မရဘူးလေ။ ကိုယ်က ရှာနိုင် ဖွေနိုင်တော့တာမှ မဟုတ်တာ။ “အဖေ … ရော့ဒီမှာ … စား”ဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးပဲ။ ပဲကြော်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဝါးနိုင်မှာလဲ။ မုန့်ဟင်းခါးကအခန့်မသင့်ရင် ဝမ်းသွားမယ်။ အိမ်သာကို ဖင်ဒယဥ့်တိုက်နဲ့ သွားရတဲ့ဒုက္ခက သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆီးအိုးကို တောင် ဆောင့်အောင့်နေကြတာ။“အဖေ ဘာလို့ မစားတာလဲ”“အဖေ ဗိုက်မဆာလို့ပါကွာ”“အဲ့ဒါဆိုလည်း စောစောကပြောပေါ့။ … Read more
သောကြာသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ သောကြာသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအစစအရာရာသတိကြီးစွာထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ရန်များသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ပြဿနာတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတတ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လည်းသူတပါးကိစ္စတွေဖြေရှင်းရတတ်ပါသည်။သတိထားပါ။ ခရီးကံတော့အလွန်ကောင်းပါသည်။ မိတ်ဆွေတွေရဲအကူညီကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ကိစ္စ ၊အဖိုးတန်းပစ္စည်းအရောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်အဆာက်ပစ္စည်း၊အုတ်၊သစ်၊အသီးနှံလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ မြေ၊အမွေ၊ပညာရေးကိစ္စတွေကတော့ဆုံးဖြတ်ရခတ်လိမ့်မည်။ ငွေကြေးကအ၀င်ထါက်မျှတပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်ရဲသတင်းကောင်းကြားရမည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးဝေးလေကောင်းဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးကျနေပါသည်။ ကျန်မာရေးအစာအိမ်ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။သတိထားပါ။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၁၆အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အိမ်ဘုရားတွင်သာသနာ့အလံ(၆)လက်လှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ သောကွာသား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးအစစအရာရာသတိကွီးစှာထားဖို့လိုအပျပါသညျ။ ရနျမြားသောအခြိနျဖွဈပါသညျ။ပွဿနာတှလေညျးတဈခုပွီးတဈခုဝငျလာတတျပါသညျ။ ကိုယျ့ကိစ်စမဟုတျလညျးသူတပါးကိစ်စတှဖွေရှေငျးရတတျပါသညျ။သတိထားပါ။ … Read more
“အို” သှေးပိုငျရှငျလေးတှကေို ခဈြသူတျောမယျဆိုရငျ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြ(၇)ခကျြ…။
အချစ်ရေး အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် နားလည်ပေးဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိမှဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အိုသွေး ပိုင်ရှင်လေးတွေကို ချစ်သူတော်ထားရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားမှ သူတို့လေးတွေကို နားလည်ပေးနိုင်မှာပါနော်။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူလေးတွေ အိုသွေး ပိုင်ရှင်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် တွေဝေတုံ့ဆိုင်းနေတာမျိုးမရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ ပြတ်သားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေအမြင်မှာတော့ အားနည်းတဲ့သူ၊ အပျင်းကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်ပြီး ပျော့ညံ့တယ်လို့ အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။ (၂) စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တယ် ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူ၊ လိုချင်တာကို မရရအောင်ယူတဲ့သူတွေဆိုတာ အို သွေးတွေပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ result မျိုးမရတာ၊ ရှုံးနိမ့်တာမျိုးကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ result နဲ့လွဲသွားရင် စိတ်ထိခိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမထားသင့်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့။ … Read more
ကွာသပတေးသား/သမီးမြားအတှကျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျ ထိတဈပါတျစာဟောစာတမျး
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ ကြာသပတေးသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစိတ်လေစိတ်နှစ်ခါဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ စိတ်ရှည်ရှည်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးအလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။ အထင်လွဲစွပ်စွဲခံရတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်ဦးကိစ္စတွေမတင်မကျဖြစ်တတ်သည်။ ပြည်တွင်ခရီးကောင်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်တွေလွဲချော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပြီးငွေတွေမြုပ်နေတတ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းရာထူးနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးခွဲခွာနေထိုင်ရတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတောသွေးအားနည်းတတ်သည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအနက်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၅၇အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အိမ်ဘုရားတွင်ပေါင်မုန့်(၅)ခုလှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ ကွာသပတေးသား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးစိတျလစေိတျနှဈခါဖွဈစရာတှကွေုံတှရေ့တတျသညျ။ စိတျရှညျရှညျခေါငျးအေးအေးထားပွီးအလုပျလုပျသငျ့ပါသညျ။ အထငျလှဲစှပျစှဲခံရတာတှလေညျးကွုံတှရေ့တတျသညျ။ … Read more
စိတ်ပူနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကို အပွင့်လင်းဆုံးပြောလာတဲ့ မယ်လိုဒီ . . .
သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေကြောင့် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မယ်လိုဒီက သူမရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲမှုမရှိစေဖို့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကနေပြီး အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။ “စိတ်ပူပင်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အသိပေးပါရစေရှင် ကျွန်မအနေနဲ့ မတူညီမှုများစွာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနေအထား အခြေအနေတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက အမျိုးသားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပါ။ သားလေးနဲ့ မိဘများရဲ့မျက်နှာ၊ ထောက်ထားစရာတွေရှိတာကြောင့်သာ တရားဝင်မထုတ်မပြောခဲ့တာပါ။ တစ်မိုးထဲအောက်၊ မိဘများနဲ့အတူ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာ ကာလအတော်ကြာပြီဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ သိကြပါတယ်”“သားလေးကိစ္စရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲလမ်းတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ကျွန်မက သားလေးရဲ့မိဘအနေနဲ့ရော၊ မိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှန်သွားလာတာလည်း ရှိခဲ့ကြပေမယ့်လည်း နှစ်ဦးစလုံးဟာ လွတ်လပ်သူ၊ အမှီအခိုကင်းသူအနေနဲ့ သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ကြတာပါ. တရားဝင်လွတ်လပ်ကြသူတွေမို့လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကအစ စွက်ဖက်မှုလည်း … Read more
ဗုဒ္ဓဟူးသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓဟူးသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းနာမည်ဂုဏ်သတင်းတက်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားကိစ္စတွေအကျိုးထူးမည်။ ခရီးကောင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရမည်။ အလှူမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မည်။ အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်၊ကားကျောက်လုပ်ငန်တွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အောက်လက်ငယ်သားကိစ္စစိတ်ရှုပ်ခေါင်းစားရတတ်သည်။ ရွှေလုပ်ငန်းအရောင်းဝယ်အဆင်မပြေတတ်ပါ။ ငွေောကးကတော့အ၀င်များလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များတကျက်ကျက်စကားများရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကြည်နူးဖွယ်ရာများကြုံတွေရတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတော့ရင်ဘတ်အောင့်သောရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအ၀ါရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၇၂အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ နန်းကြီးသုပ်(၂)ပွဲလှုပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ ဗုဒ်ဓဟူးသား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးနာမညျဂုဏျသတငျးတကျစရာတှကွေုံတှရေ့တတျသညျ။ နိုငျငံခွားလူမြိုးခွားကိစ်စတှအေကြိုးထူးမညျ။ ခရီးကောငျးတှလေညျးကွုံတှရေ့မညျ။ … Read more
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပါ
June 22, 2020 by Achawlaymyar
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပါ ငါး အရိုးဆူးလျှင် အတော့်ကို ခံစားရခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် အခန့်မသင့်လျှင်ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေ ခွဲထုတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ငါးအရိုးမဆူးလျှင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ် တွင်းကုထုံးလေးများကို ရသမျှစုစည်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေရာနည်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ် (၁) သံပုရာသီးကို အခွံမာများခွါ၍ အလုံးကို သွားကြားထိုးသံဖြင့် အပေါက်လေးများ ထိုးဆွထား၍ခေတ္တမျှ ငုံထားပါ။ အရည်ကို တဖြေးဖြေး မျိုချပေးပါ။ အချဉ်ဓါတ်က ငါးရိုးများကိုတိုက်စားသွားပေလိမ့်မယ် (၂) ငှက်ပျောသီး စားပါ။ ဘာငှက်ပျောသီးပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ် (၃) ကြက်ဥအကာကို သောက်ပေးပါ။ ငါးရိုးများ အချွဲများနှင့်အတူ ကျသွားပါလိမ့်မယ် (၄) သံပုရာသီး သို့မဟုတ် … Read more
အင်္ဂါသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ အင်္ဂါသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအဘက်ဘက်ကကံဇာတာတွေပွင့်လန်းနေပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလည်းအရှိန်မြင့်ပြီးလုပ်သင့်သောအချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသစ်စခြင်း၊နေရာသစ်ပြောင်းခြင်းတွေကောင်းမွန်ပါသည်။ ရပ်ဝေးပြည်ပခရီးကောင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ရပ်ဝေးကစာအဆက်သွယ်ကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။ မိတ်ရင်းဆရာရင်းတွေရဲအထင်လွဲမှုတွေတော့ခံရတတ်ပါသည်။ မြေ၊အမွေ၊ကားကိစ္စတွေအနှောက်ယှက်အထစ်အငေါ့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သွပ်သံသစ်ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်ပါသည်။ သူတပါးပြသနာကြာညှပ်ဖြေရှင်းရတတ်ပါသည်။သတိထားပါ။ စပ်တူလုပ်ငန်းကိစ္စများဆုံဖြတ်ရန်ခတ်ခဲတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စကတော့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များနားလည်မှုလွဲမှားတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံကောင်းနေပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတော့ဦးခေါင်းကိုက်ခဲသောရောဂါဖြစ်တတ်သည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအပြာရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၆၄အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ သပြေ(၂၁)ညွန်လှုပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ အင်ျဂါသား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး … Read more
တနင်္လာသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်မှ (၂၃)ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း။
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ တနင်္လာသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေကြုံတွေရမည်။ ပညာရေးသင်တန်းကိစ္စစာမေးပွဲကိစ္စအထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ စပ်တူအလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စာချုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကောင်းများလည်းကြုံတွေ့ရမည်။ ငွေကြေးကံလည်းအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်း၊ဘုရာဖူးခရီးတွေလည်းပေါ်လာမည်းအလွန်ကောင်းပါသည်။ အလှူမင်္ဂလာပွဲတွေလည်းပေါ်လာမည်။ အထည်ထီးဖိနပ်လုပ်ငန်းတွေတော့သတိထားပြီးလုပ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဆင်မပြေမှုများတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်ပြီးမှပြေလည်သွားလိမ့်မည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကလေထိုးလေအောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၃၅အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင်စမူဆာ(၅)ခုလှူဒါန်းပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်ပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ တနင်ျလာသား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာမိဆှကေောငျးဆရာကောငျးတှကွေုံတှရေမညျ။ … Read more
တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက် ဇွန်လ(၂၂)ရက်မှ (၂၉)ရက်နေ့ထိတစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဗေဒင် ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှ(၂၉)ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက်တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအဖတ်ဖတ်ကအခွင့်ရေးကောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မည်။ အလုပ်တွေတိုးချဲ့သင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ကံတရားကမျက်နှာသာပေးတတတဲ့ကိန်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ငွေဝင်မယ်ရွှေကံကောင်းမယ်။ အနုပညာအလုပ်အလှကုန်အလုပ်တွေအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စပ်တူလုပ်ငန်းကိစ္စ၊စာချုပ်ရမည့်ကိစ္စတွေကတော့အထူးသတိထားပါ။ ကိုယ်တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အပေါ်မနာလိုအပြိုင်အဆိုင်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ သတိထားပါ။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများမရေမရာဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အောက်လက်ငယ်သာအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးသတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းနေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာမိုးပြာရောင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၂၄အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင်ခရေ(၆)ညွန့်လှူဒါန်းပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်ပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့ သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ * အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ ကလေးအမည်ပေးနဲ့ဇာတာ ဗေဒင်အဟောများ #1875baydin messenger မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုံပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဗဒေငျ ဇှနျလ(၂၂)ရကျနမှေ့(၂၉)ရကျနအေ့ထိ တနင်ျဂနှသေား/သမီးမြားအတှကျတဈပါတျစာဟောစာတမျး ဒီရကျပိုငျးအတှငျးအဖတျဖတျကအခှငျ့ရေးကောငျးတှပေျေါလာလိမျ့မညျ။ အလုပျတှတေိုးခြဲ့သငျ့တဲ့အခြိနျဖွဈပါသညျ။ကံတရားကမကျြနှာသာပေးတတတဲ့ကိနျမြိုးဖွဈပါသညျ။ … Read more
← Previous Page1 … Page184 Page185 Page186 … Page209 Next →